1 ဂိုဏ်း 1 Way Light Switch
[template id ="3639"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. Rich product lines meets various home improvement and engineering needs. Back-housing of 1 ဂိုဏ်း 1 Way Light Switch uses fire-resistant PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. Quick Info Type…
2 ဂိုဏ်း 1 Way Switches
[template id ="3638"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. Back-housing of2ဂိုဏ်း 1 Way Light Switches uses fire-resistant PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. Quick Info Type…
[template id ="3637"] Slim profile fits every design and places. Back-housing of Triple1 Way Light Switches uses fire-resistant PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. Quick Info Type Light Switch Series W80 series Brand Name SOK Model Number W80/L3/1 Rated Voltage 250V~ Rated…
4 ဂိုဏ်း 1 Way ကို switch သည် 86mm
[template id ="3635"] Slim profile fits every design and places. Back-housing of4ဂိုဏ်း 1 Way Light Switches 86mm uses fire-resistant PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. We also have 147mm design. Quick Info Type Light Switch Series W80 series Brand Name…
1 Neon ၁၄၇ မီလီမီတာဖြင့် Gang 45A Double Pole Switch
[template id ="3634"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. Back-housing of 1 Gang 45A Double Pole Switch with Neon 147mm uses fire-resistant and high quality PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ,…
1 Neon ၈၆ မီလီမီတာနှင့်အတူဂန် 45A နှစ်လုံးဝင်ရိုးစွန်းပြောင်းပါ
[template id ="3633"] Slim profile fits every designs and places. Back-housing of 1 Gang 45A Double Pole Switch with Neon 86mm uses fire-resistant and high quality PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. We also have 86*147mm design. Quick Info Type Light Switch…
4 ဂိုဏ်း 1 Way Light Switch သည် ၁၄၇ မီလီမီတာရှိသည်
[template id ="3632"] Slim profile fits every designs and places. Back-housing of4ဂိုဏ်း 1 Way Light Switches 147mm uses fire-resistant PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. We also have 86mm design. Quick Info Type Light Switch Series W80 series Brand Name…
6 ဂိုဏ်း 1 Way Switches
[template id ="3631"] Slim profile fits every design and places. Back-housing of6ဂိုဏ်း 1 Way Light Switches uses fire-resistant PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. Quick Info Type Light Switch Series W80 series Brand Name SOK Model Number W80/L6/1 Rated Voltage…
[template id ="3629"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. Back-housing of 1 Gang 20A Double Pole Wide Rocker Switch with Neon uses fire-resistant and high quality PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို,…
[template id ="3639"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. 1 Gang 20A Double Pole Switch with Neon uses fire-resistant and high quality PC material, and silver in lay red cooper rocker which guarantees your safety. It…
[template id ="3638"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. Back-housing of Two Gang 20A Double Pole Switches with Neon uses fire-resistant and high quality PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC…
1 ဂိုဏ်းတံခါးခေါင်းလောင်း Switch
[template id ="3637"] Slim profile fits every design and places. Back-housing of Single Door Bell Switch uses fire-resistant PC material, which guarantees your safety. သူ့မှာ CB ရှိတယ်, ဒီနည်းကို, ဆာဆ, GCC လက်မှတ်. Quick Info Type Light Switch Series W80 series Brand Name SOK Model Number W80/L1/LB Rated Voltage 250V~ Rated…
[template id ="3635"] Simple and round appearance designs adapt to various decoration styles. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. Both cover & Back-housing of Curtain Switch uses fire-resistant and high quality PC material, which guarantees your safety. Hot silver Logo is fashionable & attractive. Quick…
Single 13A BS Power Outlet ဖြစ်သည်
[template id ="3634"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. Back-housing of Single 13A BS Power Outlet uses fire-resistant and high quality PC material, phosphor cooper, Child-proof Shutter design, Keeping you and your family safe. It has…
1 Gang Double Pole ကို 13A BS Power Outlet သို့ပြောင်းလိုက်သည်
[template id ="3633"] ရိုးရှင်းပြီးပတ် ၀ န်းကျင်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းသည်အမျိုးမျိုးသောအလှဆင်စတိုင်များနှင့်လိုက်ဖက်သည်. ကြွယ်ဝသောထုတ်ကုန်လိုင်းသည်အိမ်တိုးတက်မှုနှင့်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်. Single D/P Switched 13A BS Power Outlet uses fire-resistant PC materials, Child-proof Shutter နှင့် double pole structure သည်သင်နှင့်သင့်မိသားစုကိုနှစ်ဆကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်. It has…